नेपाली फिल्म धेरै खेल्न चाहन्छुः मोनिका बेदी | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नव वर्ष २०६८ को स्वागतमा लालीगुराँस परिवार कुवेतले साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने
३० हजारमा श्रीमती बेच्ने प्रहरी खोरमा →
बलिउड चलचित्रकी नायिका मोनिका बेदी बलिउड निर्देशक आकाश पाण्डेको निर्देशन तथा साजय नरेन्द्रको निर्माण र सुरेश सुमनको प्रस्तुतिमा नेपालका नायक निखिल उप्रेती नायक रहेको नेपाली चलचित्र परिचयमा अभिनय गर्न शनिबार नेपाल आइन्। काठमाडौं आएको केही समयमै होटलमा गएर फ्रेस भई लाजिम्पाटस्थित नेपाली चुलोमा भान्छा गर्न पुगेकी गोरी सुन्दरी मोनिका त्यहाँ मौलिक नेपाली कला र संस्कृतिले भरिएको नृत्य हेरेर मख्ख परिन्।नेपालको मौलिक नृत्यमा रमाएकी ताज महल नामक हिन्दी चलचित्रबाट डेब्यु गरी प्यार इश्क और मोहब्बत जोडी नम्र वन जानम सम्झा करो काला सामाज्य्र जंजीर एक फूल तीन काँटेजस्ता हिन्दी चलचित्रकी यी नायिकासँग नेपाल समाचारपत्रले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ।
नेपाल कस्तो लाग्यो ?
एकदमै राम्रो यहाँका मानिस झनै राम्रा र मिजासिला। धेरै माया र स्वागत पाएँ। यो माया र सद्भाव हमेसा यादगार रहनेछ। म फस्ट टाइम नेपाल आएकी हुँ तर यहाँको ’boutमा धेरै सुनेकी थिएँ। यहाँको कल्चर रिच छ। नेपाली फिल्मको ’boutमा सुनेकी छु हेरेको छैन। तर बिस्तारै प्रगति गर्दैछ भनेर थाहा छ। मैले तेलगु बंगाली तमिल पाजाबी हिन्दी गरी धेरै भाषाको फिल्ममा काम गरेकी छु। अर्को एउटा भिन्न भाषा र कल्चरको फिल्म गर्दा एक्साइटेड छु।
नेपाली हिरोसँग काम गर्दै हुनुहन्छ कस्तो लागिरहेको छ ?
राम्रो लागिरहेको छ। मैले निखिल उप्रेती को तारिफ धेरै सुनेकी छु। पहिलोपल्ट भेट्दा सिम्पल र सजिलो मान्छे लाग्यो। कोही पनि कलाकार राम्रो कलाकार मात्र भएर हुँदैन राम्रो मानिस पनि हुनुपर्छ। निखिलमा दुबै क्वालिटी पाएँ काम सजिलोसँग हुन्छ भन्ने ठानेकी छु।
नेपालमा कहाँ घुम्न चाहनुहुन्छ ?
मैले सुनेकी छु पोखरा राम्रो छ रे। यो फिल्मको सुटिङ त्यहीँ हुँदै छ। २०-२५ दिनको सेड्युलमा धेरै घुम्ने आशा गरेकी छु। काठमाडौंको प्रशिद्ध पशुपति मन्दिर गएर आशीर्वाद पनि लिन चाहन्छु।
नेपाली फिल्ममा काम गर्दै हुनुहुन्छ भाषा आउँछ त ?
मेरो विचारमा फिल्ममा काम गर्न भाषा समस्या हुँदैन। मैले फरक-फरक भाषाका धेरै फिल्ममा काम गरेकी छु। त्यसैले पनि मेरो अनुभवले यसमा समस्या हुँदैनजस्तो लाग्छ मेहनतचाहिँ गर्नुपर्छ होला।
नेपाली फिल्म पछि फेरि गर्न चाहनुहुन्छ ?
म यहाँ आउँदा एउटा नेपाली फिल्म गर्ने हिसाबले आएकी हुँ। तर यहाँ पाएको वेलकम अनि यहाँको कल्चरले गर्दा एउटा होइन धेरै फिल्म गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा थिएन नेपाल यति धेरै सुन्दर छ भनेर।
के कुराले तान्यो नेपाली फिल्ममा ?
मलाई जहिले पनि फरक-फरक भाषाको फिल्म गर्न मन पर्छ। फरक भाषाको फिल्म गर्नु एउटा च्यालेन्ज पनि। यसबाट फरक ठाउँ र कल्चर थाहा हुन्छ। योभन्दा राम्रो के हुन्छ र एउटा कलाकारका लागि जति धेरै ठाउँमा पुग्न सक्यो जति धेरै फिल्म गर्न सक्यो जति सिक्न सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ।
बलिउडमा हिजोआज सेक्स र ग्ल्यामरले प्रस्रय पाइरहेको छ के भन्नुहुन्छ ?
यस्तो होइन कि खाली त्यस्तै फिल्म बनिरहेको छ। संजयलिला वंशालीलगायत धेरै छन् जसले कल्चर मेन्टन गर्दै राम्रो पिक्चर बनाइरहेका छन्। बलिउडको फिल्म मोर्डनाइज जरुर भइरहेको छ। कहीँ कहीँ समय परिवर्तन भइरहको छ। नयाँ जेनेरेसन आएको छ। जो माग छ हिट भएको छ एक्सपोजिङ भइरहेको छ। पैसा बनाउनका लागि। जरुरी नै छ भन्नेचाहिँ छैन।
कहिलेसम्म यो ट्रेन्ड चल्ला बॆस्सरी हासिन् उनी ?
ट्रेन्ड त चेन्ज हुन्छ। रिपिट हुन थालेपछि मान्छे बोर हुन्छ। पृथकता खोज्छ। दर्शकले नचाहुन्जेल चल्ला कि यस्तो ट्रेन्ड हेरौं नयाँ समय कस्तो आउँछ। यस्तो रोल कत्तिको मन पराउनुहुन्छ
मैले आजसम्म त्यस्तो फिल्म गरेको छैन जसमा लिमिट क्रस गरेको होस्। मसँग त्यस्तो अनुभव छैन र गर्दिन पनि। लिमिट क्रस मबाट हुँदैन।
पोखरा घुम्ने चाहना
चर्चित बलिउड नायिका मोनिका बेदी नेपाली चलचित्र परिचयको छायांकनका लागि आइतबार पोखरा आइपुगेकी छन्।
उनको साथमा चलचित्रका निर्देशक आकाश पाण्डे र चलचित्र निर्माता संजय नरेन्द्रलगायतको टोली पनि पोखरा आएको छ। शुक्रबारबाट छायांकन शुरु भइसके पनि यसका निर्देशक र निर्माता मोनिकालाई लिन काठमाडौं गएका थिए। पोखरा विमानास्थलमा नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै मोनिकाले नेपाली चलचित्र उद्योगले फड्को मारेको भन्दै प्रशंसा गरिन्। पोखरामा बस्दा उनले छायांकनको अलावा पर्यटकीय ठाउँ घुम्ने योजना बनाएकी छन् । उनी परिचयमा निखिल उप्रेतीको जोडीको रुपमा देखिनेछिन्। चलचित्रको छायांकनका लागि निखिल पनि पोखरा आइसकेका छन्। निर्देशक आकाश पाण्डेले परिचय चलचित्रमा निखिललाई फरक भूमिका दर्शकले देख्न पाउने बताए । निखिलको एक्सन दर्शकले हेरिसेकेका छन् -उनले भने- यसमा कमेडी र इमोसनल रुपमा देख्न पाउनेछन्।
Posted By : Narayan Nepal Source : newsofnepal